Dividends(Dividends) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
राष्ट्र बैंकद्वारा स्वावलम्बन लघुवित्तको लाभांश स्वीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले पुस २७ गते पत्र पठाउँदै गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको लाभांश स्वीकृत गरेको जानकारी गराएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २० प्रतिशतभन्दा बढी...
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो मंगलबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफा र सेयर प्रिमियमबापत रहेको रकमबाट चुक्तापुँजी ५० करोड रुपयाँको कुल ५.१० प्रतिशतले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ�...
सिभिल लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो पुस २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। संस्थाले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट गत असार मसान्तसम्म कायम चुक्तापुँजी ११ करोड ९८ लाख १९ हजार ७०० रुपैयाँ र सातौँ वार्षिक ...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले नगद लाभांशमात्र बाँड्ने, कति?
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांशमात्र वितरण गर्ने प्रस्ताव हो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता सेयरपुँजीमा ११.०५ प्रतिशतका...
नेरुडे लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस झन्डै आधाले घट्यो
काठमाण्डौ । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको कुल ८.४२ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा ८ प्रतिशतले हुन आउने...
निर्धन उत्थान लघुवित्तको लाभांश घट्यो, गत वर्षका लागि कति छ बोनस र नगद ?
काठमाण्डौ । कोरोना कहरका कारण निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांशमा संकुचन आएको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांशमा झन्डै २७ प्रतिशतले संकुचन आएको हो। संस्थाको सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी...
तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्सद्वारा नगद लाभांश प्रस्ताव, कति दिँदैछ ?
काठमाण्डौ । तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। तारागाउँ रिजेन्स होटेल्सको सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार साँझ बसेको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। सञ्चालक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट चुक्तापुँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ८६ लाख...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सद्वारा ३१.५८% लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बुधबार अपराह्न बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापुँजी ५० करोड ४ लाख १५ हजार ४०० रुपैयाँको कुल ३१.५८ प्रतिशतले हुन आउने १५ करोड ८० लाख ३१ हजार १८३.३२ रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। जसमा...
गणपति लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बुधबार दिउँसो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्तापुँजी ११ करोड ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँको कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा १५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६६ लाख ११ हजार ७५० रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर...
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई बम्पर लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफाबाट २०७७ असार मसान्तसम्म कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ५ करोड ७३ लाख १० हजार ६०० रुपैयाँको कुल ३८ प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड १७ लाख ७८ हजार २८...
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको लाभांश ५३%ले घट्यो, यसपालि बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो आइतबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजी २६ करोड ४० लाख ४५ हजार २५० रुपैयाँको कुल २७ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड १२ लाख ९२ हजार २१७ रुपैयाँबराबरको...
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजीको कुल ३ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। जसमा २.८५ प्रतिशतले हुन आउने ३ लाख २२ हजार ८१४ कित्ता बोनस सेयर र ०.१५ प्रतिशतले हुने १६ लाख ९९ हजार २१...
सेन्ट्रल फाइनान्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले गत वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको कुल १० प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा कुल चुक्तापुँजी ८२ करोड ३३ लाख ९७ हजार ८५९ रुपैयाँको ७ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड ७६ लाख ३७ हजार ८५०.१३ �...
गरिमा विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको गत पुस १० गते शुक्रबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब २३ करोड ८६ लाख ८९ हजार ४२८.२६ रुपैयाँको कुल १४.२१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १३.५०...
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १०% बोनस सेयर बाँड्ने, माघ १५ मा एजीएम, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब ८ करोड २६ लाख २६ हजार ५४८ रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने ३० करोड ८२ लाख ६२ हजार ६५५ रुपैयाँबराबर बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव...